ရှီက နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး စည်းမျဉ်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအတွက်ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အင်္ဂါနေ့တွင် ၇၆ ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ၏ အထွေထွေဆွေးနွေးမှု၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် “မိမိတို့အနေဖြင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုခိုင်မာစေရန်အားထုတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး အပြန်အလှန်လေးစားမှု နှင့် နှစ်ဘက် အကျိုးစီးပွား များဖြင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကို တွန်းအားပေး မြှင့်တင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း” မှတ်ချက်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
ငြိမ်းချမ်း၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုသည် လူသားမျိုးနွယ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပုံစံအမျိုးမျိုးကို လက်ခံသင့်ကြောင်း နှင့် ခေတ်မီတိုးတက်မှုအတွက် မတူခြားနားသော နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ကို ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်အောင် စီမံဖန်တီးပေးရမည်ဖြစ်ကြောင် ရှီကဆိုသည်။ ” ဒီမိုကရေစီဆိုတာဟာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံထဲအတွက် အထူးအခွင့်အရေးခံစားရန်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံအားလုံးရှိပြည်သူများအနေနဲ့လည်းခံစားခွင့်ရှိပါကြောင်း” ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ပေါ်တွင် လတ်တလောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအားရည်ညွှန်းရာတွင် ရှီက “ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းခြင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ပြင်ပက စစ်ရေးကြားဝင်ခြင်းဟာ လိုအပ်ချက်မဟုတ်ဘဲ ဘေးသင့်မှုသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့အနေနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ ပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“မိမိတို့အနေဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်များအားလုံး ဘုံလိုက်နာတန်ဖိုးထားရမည့်အချက်များဖြစ်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊သာတူညီမျှရှိမှု၊ တရားမျှတမှု၊ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျမှုနှင့် လွတ်လပ်မှုတို့ကိုအားပေးထောက်ခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲပြားစေခြင်း သို့မဟုတ် ရလဒ်မရှိသည့်လုပ်ရပ်များအားရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ကြောင်း”ရှီကဆိုသည်။
ရှီက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အောင်မြင်မှုသည် အခြားနိုင်ငံ၏ ကျရှုံးမှုအပေါ်တွင်အခြေခံရမည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီးသည် နိုင်ငံများအားလုံး သာတူညီမျှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်စေရန် လုံလောက်သည့်အနေအထားရှိကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် လုံးဝ လုံးဝ ဥဿုံ မည်သည့်နိုင်ငံကိုမှ ကျူးကျော်ရန်စမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဗိုလ်ကျစိုးမိုးချယ်လှယ်မည်မဟုတ်ကြောင်း ရှီက အလေးအနက်ထားပြောကြားခဲ့သည်။ ရှီက တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအားငြိမ်းချမ်းစေရန်ထုဆစ်ပုံဖော်သူ၊ ကမ္ဘာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေးကမ်းသူ၊နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်းအခင်းအကျင်းများအားလိုက်နာသူနှင့် အများပြည်သူသုံး ကုန်စည်များအား ထောက်ပံ့သူအဖြစ်သာအမြဲရပ်တည်သွားမည်ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံကအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်များဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအားအခွင့်အလမ်းအသစ်များဆက်လက်ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဟု ရှီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“မိမိတို့အနေဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှု တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် စစ်မှန်သော ဘက်စုံမူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း” ရှိကဆိုသည်။ ” ကမ္ဘာကြီးပေါ်တွင် နိုင်ငံတကာစနစ်သည်တစ်ခုတည်းသာတည်ရှိကြောင်း ၎င်းမှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ နိုင်ငံတကာစနစ်ဖြစ်ပြီး အဓိကကျကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာညွှန်ကြားချက်သည်လည်းတစ်ခုတည်းပင်ရှိကြောင်း ၎င်းမှာလည်း နိုင်ငံတကာ ဥပဒေအပေါ်တွင် အခြေတည်သည့်နိုင်ငံတကာ စဉ်းမျဉ်းအခင်းအကျင်းသည်လည်း တစ်ခုပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာလည်းတစ်ခုတည်းသာရှိပါကြောင်း အဆိုပါစည်မျဉ်းများသည် ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အခြေခံမူများဖြင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုထိန်းချုပ်သောအခြေခံစံနှုန်းများပေါ်တွင်မှီတည်သည့် စည်းမျဉ်းများသာဖြစ်ကြောင်း”ပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂသည် စစ်မှန်သောဘက်ပေါင်းစုံဝါဒ ကို မြင့်မားစွာစွဲကိုင်ထားသင့်ကြောင်းနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ လုံခြုံရေးအားပူးပေါင်းထိန်းကြောင်းရန်နိုင်ငံများအားလုံးအတွက် ဗဟိုချက်ကျသည့် စင်္ကြံ ဖြစ်သင့်ကြောင်း ၊ အောင်မြင်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအား မျှဝေခြင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီး၏ အနာဂတ် အတွက်အစီအစဉ်များရေးဆွဲသင့်ကြောင်း ရှီကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
BEIJING, Sept. 21 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Tuesday elaborated on the guiding principles for international relations.
“We must strengthen solidarity and promote mutual respect and win-win cooperation in conducting international relations,” Xi said in his statement delivered via video at the general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly.
A world of peace and development should embrace civilizations of various forms, and must accommodate diverse paths to modernization, Xi said. “Democracy is notaspecial right reserved to an individual country, butaright for the people of all countries to enjoy.”
Xi added that one country’s success does not have to mean another country’s failure, and that the world is big enough to accommodate common development and progress of all countries.
“We must improve global governance and practice true multilateralism,” Xi said. “In the world, there is only one international system, i.e. the international system with the United Nations at its core. There is only one international order, i.e. the international order underpinned by international law. There is only one set of rules, i.e. the basic norms governing international relations underpinned by the purposes and principles of the UN Charter.”
The UN should hold high the banner of true multilateralism and serve as the central platform for countries to jointly safeguard universal security, share development achievements and chart the course for the future of the world, Xi said. ■